ကောလောသဲ သြဝါဒစာ။ – Letter to the Colossians – JESUS UNLTD
ကောလောသဲ သြဝါဒစာ။ – Letter to the Colossians
၁ ကျွန်တော်က ပေါလု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်အရ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ညီ တိမောသေက ခင်ဗျားတို့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
၂ ကောလောသဲမြို့မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သန့်ရှင်းပြီး သစ္စာရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုတို့ ခင်ဗျားတို့ဆီ ကျွန်တော် စာရေးလိုက်ပါတယ်။
၃ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆီက ကျေးဇူးတော်နဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းတွေကို လက်ခံရရှိကြပါ။ ခင်ဗျားတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖခမည်းတော် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၄ ခင်ဗျားတို့က ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြပြီးတော့ ဘုရားရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိရပါတယ်။
၅ ဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ကြားတဲ့အခါ ခင်ဗျားတို့တွေ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်က ခင်ဗျားတို့အတွက် သူ့ရဲ့အမွေဥစ္စာကို ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဒီအမွေဥစ္စာကို ခင်ဗျားတို့ ရကြမယ်ဆိုတာကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ အပြည့်အဝစိတ်ချကြပါတယ်။
၆ ခရစ်တော်အကြောင်း အမှန်တရားကို ခင်ဗျားတို့ ကြားတဲ့နေ့မှာ ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်က ဘာလဲဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့တွေ နားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းကောင်းက ခင်ဗျားတို့အထဲမှာ စတင်အသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။ အခု ခင်ဗျားတို့က ယေရှုကို ယုံကြည်ပြီးတော့ သူ့အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ဝေကြတယ်။ ဒါက ရလဒ်တွေ ယူဆောင်လာပြီးတော့ လူတွေအများကြီး ခရစ်တော်ဆီကို လာကြပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လိုပဲ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေ ကြီးထွားလာပါတယ်။
၇ ကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့ ညီလေး ဧပဖြက ခင်ဗျားတို့ကို ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်း ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ သူက ခင်ဗျားတို့ အထဲမှာ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ ခရစ်တော်ကို သစ္စာရှိရှိ အစေခံနေပါတယ်။
၈ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပြည့်စေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ သူက ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
၉ ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ကြားပြီးကတည်းက ခင်ဗျားတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ ပုံမှန်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ ဘုရားရှင်က သူလုပ်ဆောင်ချင်တာတွေအတွက် ခင်ဗျားတို့ကို အသိဉာဏ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးဖို့ ဘုရားရှင်ဆီမှာ ကျွန်တော်တို့ တောင်းလျှောက်ပေးပါတယ်။ ဘုရားရှင်က ခင်ဗျားတို့ကို ဉာဏ်ပညာနဲ့ ဝိညာဉ်ရေးရာ နားလည်ခြင်းအားလုံး ပေးသနားပါစေ။
၁၀ သခင်ယေရှုက ကျွန်တော်တို့ကို ပေးခဲ့တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်း ခင်ဗျားတို့တွေ အသက်ရှင်လိုက်လျှောက်ကြရမယ်။ သူ့ကို သဘောကျနှစ်သက်စေမဲ့ အရာတွေကို အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်ကြပါ။ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆာင်ကြပါ အဲ့ဒါက ရလဒ်တွေ ရလာစေမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်ကို သိနားလည်ခြင်းမှာ ပိုပိုပြီးတော့ တိုးပွားကြပါ။
၁၁ ဘုရားသခင်က အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိ၊ သူ့ရဲ့ဘုန်းကျက်သရေရှိသမျှနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခိုင်ခံ့စေကြပါ။ အခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ခံနိုင်ရည် ပိုရှိကြပါ။ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီးတော့ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြပါ။
၁၂ သူ့ရဲ့အမွေဥစ္စာကို ရပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ အဖဘုရားရှင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အလင်းထဲမှာနေတဲ့ ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ သန့်ရှင်းသူတွေအားလုံးနဲ့အတူ ဒီအမွေဥစ္စာကို ဝေမျှကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၃ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို အမှောင်ထုထဲကနေ ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အပေါ် သက်ရောက်မယ့် မှောင်မိုက်တန်ခိုးက ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို သူချစ်တဲ့သားတော် အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်ထဲ ခေါ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
၁၄ ဘုရားရဲ့သားတော်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် သူ့ရဲ့အသွေးကို သွန်းပေးပြီးတော့ ပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က အပြစ်တွေကနေ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
၁၅ ဘုရားရဲ့သားတော်က မျက်မြင်မရတဲ့ ဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်တော် ဖြစ်ပါတယ်။ လောကကြီးကို မဖန်ဆင်းခင်ကတည်းက အဖခမည်းတော်က သူ့ရဲ့သားတော်ကို ဖြစ်ဘွားစေခဲ့ပါတယ်။
၁၆ ဘုရားသခင်က မိုးကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးမှာ တည်ရှိသမျှအရာတွေကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ မြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ မမြင်ရတဲ့အရာတွေကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ ဘုရင်တွေအတွက် ဘုရားရှင်က အခွင့်အာဏာကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ဒီအခွင့်အာဏာကို လူတွေဆီ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က တခြားလူတွေကို ဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ အုပ်ချုပ်သူတွေကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ဒါတွေကို သူ့အတွက်သူ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၇ ဘုရားသခင်က ဘာမှမရှိခင်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီးတော့ ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကို အတူတကွ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
၁၈ ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်က အသင်းတော်ရဲ့ ဦးခေါင်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ အသင်းတော်က သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သားတော်က အရာအားလုံးရဲ့အစအဦးဖြစ်ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က သေခြင်းကနေ ပထမဦးဆုံး အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သားတော်က အရာအားလုံးရဲ့ အစပထမ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉ ပြီးပြည့်စုံခြင်းအားလုံးဟာ ဘုရားရဲ့သားတော်ဆီမှာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖဘုရားသခင်က ဒါကို နှစ်သက်သဘောကျတယ်။
၂၀ ဘုရားရဲ့သားတော်က သူ့ရဲ့အသွေးကို လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ သွန်းလောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့သားတော်ကတစ်ဆင့် ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးပေါ်မှာ တည်ရှိသမျှအရာအားလုံးနဲ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့သားတော်ကတစ်ဆင့် အရာခပ်သိမ်းကို သူနဲ့ပြန်ပြီးသင့်မြတ်စေခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရှင်နဲ့ ဝေးနေခဲ့ကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ဆိုးယုတ်တဲ့အပြုအမူတွေကို လုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာ ဘုရားရှင်နဲ့ ရန်သူဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
၂၂ ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ကားတိုင်ပေါ်မှာ သေသွားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့သေခြင်းကနေ ယေရှုယုံကြည်သူတွေအားလုံးဖြစ်တဲ့ အသင်းတော်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးတော့ ဒီအသင်းတော်ကို သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ ခေါ်ခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီး ဘုရားနဲ့ပြန်သင့်မြတ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခု ခင်ဗျားတို့တွေဟာ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာရပ်ရကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သန့်ရှင်းတဲ့သူ၊ အပြစ်ကင်းတဲ့သူ နဲ့ ဘာအမှားမှမရှိတဲ့သူလို့ မြင်ပါတယ်။
၂၃ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့တွေ သံသယကင်းကင်းနဲ့ အပြည့်အဝယုံကြည်ကြရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကြားခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်အကြောင်းသတင်းကောင်းက ခင်ဗျားတို့ကို ခိုင်မာတဲ့မျှော်လင့်ခြင်း ယူလာပေးခဲ့တယ်။ ဒီမျှော်လင့်ခြင်းကို မပျောက်ဆုံးစေကြပါနဲ့။ မိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့သူတိုင်း ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ကြားကြရမယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော် ပေါလုက လူတိုင်းကို အစေခံပြီး သတင်းကောင်းကို ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၄ ခရစ်တော်က ဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးတော့ အသင်းတော်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကြောင့် ကျွန်တော် ဒုက္ခဆင်းရဲခံရပေမဲ့ ကျွန်တော် ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ အသင်းတော်ကြောင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဒုက္ခဆင်းရဲခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါဘူး။
၂၅ ကျွန်တော်က အသင်းတော်ကို အစေခံပြီးတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကို ဆောက်လုပ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အကျိုးအတွက် ဘုရားရှင်က ကျွန်တော့်ကို ဒီတာဝန်ပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော်က ဘုရားရဲ့စကားအတိုင်း ကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
၂၆ နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ ဘုရားရဲ့စကားထဲမှာလျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အရင်မျိုးဆက်ကလူတွေက ဒီလျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို မသိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဘုရားသခင်က အဲ့ဒါကို သူ့ရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆီကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။
၂၇ ပြီးတော့ ဒီလျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆီ ဖော်ပြချင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေကို သူ့ရဲ့ဘုန်းကျက်သရေနဲ့ ကြွယ်ဝစေခဲ့ပါတယ်။ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားလူမျိုးတို့၊ ခရစ်တော်ဟာ ခင်ဗျားတို့ အထဲမှာ အသက်ရှင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဘုန်းကျက်သရေထဲ ခင်ဗျားတို့တွေ ဝင်ကြရမယ်ဆိုတာကို အပြည့်အဝ စိတ်ချကြပါ။
၂၈ ကျွန်တော်တို့က ခရစ်တော်အကြောင်းဟောပြောပြီးတော့ ဘုရားရဲ့အမှန်တရားကို လူတွေ နားလည်လာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီကို ရှိရှိသမျှဉာဏ်ပညာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သင်ပေးကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူတိုင်းဟာ ယေရှုခရစ်တော်ကတစ်ဆင့် ရင့်ကျက်လာကြပါတယ်။
၂၉ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်က အလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့ အားထုတ်မှုတွေအများကြီး လုပ်တာပါ။ ကျွန်တော့်အထဲမှာ တန်ခိုးကြီးကြီးမားမားနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့အစွမ်းတန်ခိုးကို ကျွန်တော် အမှီပြုပါတယ်။ 1 I am Paul, and I became the apostle of Jesus Christ by the will of God. I and brother Timothy are greeting you.
6 The day when you heard the truth about Christ, you understood what God's grace is. Then the Good News started living in you. Now you believe in Jesus and spread the Good News about Him throughout the world. It brings results, and many people come to Christ. Their faith grows the same way as yours.
၁ အခက်အခဲတွေ အများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ ကျွန်တော်က ဘုရားသခင်ကို အစေခံမြဲခံနေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ကို သိစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားအစေခံမှုက ခင်ဗျားတို့နဲ့ လောဒိကိမှာနေတဲ့သူတွေဆီ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ထဲက တစ်ချို့က ကျွန်တော့်ကို ကိုယ်တိုင် မဆုံဖူးကြသေးပါဘူး။
၂ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ထားစေချင်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက စည်းလုံးညီညွတ်စေပြီးတော့ စိတ်နှလုံးကို အေးချမ်းစေပါတယ်။ အဖဘုရားရှင်က ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေ ဒီလျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နားလည်နိုင်ကြဖို့အတွက်လည်း ဘုရားသခင်ဆီမှာ ကျွန်တော် တောင်းလျှောက်ပေးပါတယ်။
၃ ခရစ်တော်ဆီမှာ ဖွက်ထားတဲ့ ဘဏ္ဍာတွေအားလုံးကို ခင်ဗျားတို့ ရှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီဘဏ္ဍာတွေက ခင်ဗျားတို့ကို အသိပညာနဲ့ ဉာဏ်ပညာ ပေးလိမ့်မယ်။
၄ တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ရဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ဘုရားရဲ့အမှန်တရားကနေ လမ်းလွဲစေမှာ ကျွန်တော် မလိုချင်ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ခင်ဗျားတို့ကို ဒီအကြောင်းတွေ ကျွန်တော် ပြောပြနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅ ကျွန်တော်က ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ဝေးနေပေမဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကတော့ ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေ အစစအရာရာ အဆင်ပြေနေကြတာကို ကျွန်တော် တွေ့ရတယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေ ခရစ်တော်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယုံကြည်ကြတာက ကျွန်တော့်ကို ဝမ်းသာစေပါတယ်။
၆ ခင်ဗျားတို့က သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်ခံကြပြီဆိုတော့ အခု ခင်ဗျားတို့ဟာ ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြုမူကြရမယ်။
၇ ခရစ်တော်ဆီမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်ပြီးတော့ ကြီးထွားတိုးတက်ကြပါ။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်မာစေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတော်ကို ပိုပြီးချီမွမ်းခြင်းနဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ဒီထက်မက ခိုင်မာစေကြပါ။
၈ ညီအစ်ကိုတို့၊ အတွေးအခါ်ဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကို စိတ်မဝင်စားကြပါနဲ့။ ပြီးတော့ ယုတ္တိမရှိတာတွေကိုလည်း မယုံကြည်ကြပါနဲ့။ ဒီအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ ယုတ္တိမရှိတာတွေက လောကလူသားတွေ ဖန်တီးသတ်မှတ်တဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ အပေါ်မှာပဲ အခြေခံနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းတွေအတိုင်း အသက်ရှင် လိုက်လျှောက်ကြတယ်ဆိုတာ သေချာစေကြပါ။
၉ ဘုရားရှင်က ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ကြွလာခဲ့ပြီးတော့ သူ့အထဲမှာ ပြည့်ဝစုံလင်စွာနဲ့ အသက်ရှင်တယ်။
၁၀ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်ဆီမှာ အသက်ရှင်သူတွေဖြစ်လို့ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ဝစုံလင်မှု ရှိပါတယ်။ ခရစ်တော်က ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ အစွမ်းတန်ခိုးတွေနဲ့ အခွင့်အာဏာတွေအားလုံးရဲ့ အထက်မှာရှိပါတယ်။
၁၁ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားလူမျိုးတို့၊ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့လည်း အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို အရေဖျားလှီးခဲ့တာ ဘုရားရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို အရေဖျားလှီးခဲ့တာ ခရစ်တော် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇာတိကိုယ်ခန္ဓာကို မထိမကိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ်တော်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိကို ဖယ်ရှားပေးပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူကို အရေဖျားလှီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်ကို သေခြင်းကနေ ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ တန်ခိုးကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြလို့ ရေနှစ်ခြင်းဗတ္တိဇံ ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗတ္တိဇံခံနေတဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့တွေ ရေအောက်ကို ရောက်သွားပြီးတော့ ခရစ်တော်နဲ့အတူတကွ ကိုယ်တိုင် မြှုပ်နှံခံခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေထဲကနေ ခင်ဗျားတို့ ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ ခရစ်တော်နဲ့အတူတကွ အသက်ရှင်တဲ့သူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၁၃ အတိတ်က ခင်ဗျားတို့တွေ အပြစ်တွေကို လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြစ်တွေက ခင်ဗျားတို့ကို သေစေခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရေဖျားမလှီးခြင်းမခံခဲ့ကြသလို ဘုရားရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေလည်း မဟုတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ ခရစ်တော်နဲ့အတူ အသက်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။
၁၄ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်စာရင်းက ကျွန်တော်တို့ကို စွဲချက်တင်ပြီးတော့ ဘုရားရှင်ဆီမှာ အကြွေးတင်သူတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်စာရင်းတွေကို လက်ဝါးကားတိုင်မှာ သံနဲ့ရိုက်သတ်ခဲ့ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ဆီသွားမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းက အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
၁၅ ခရစ်တော်က အုပ်ချုပ်သူမင်းတွေနဲ့ အာဏာရှိသူတွေကို ဝိညာဉ်လောကမှာ အစွမ်းအစမဲ့စေခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က သူတို့ကို လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အနိုင်ယူအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးတော့ သူတို့ကို လူူသိရှင်ကြား အရှက်တကွဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
၁၆ ခင်ဗျားတို့ စားတာ၊ သောက်တာ၊ ယုဒလူမျိုးတွေရဲ့ပွဲတော်တွေကို ဆင်နွှဲကြတာ၊ လဆန်းပွဲကို ဆင်နွှဲကြတာနဲ့ ဥပုသ်စောင့်တာတွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ အဲဒါတွေကြောင့် ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်သူမှ အပြစ်မတင်ပါစေနဲ့။
၁၇ ယုဒလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေက အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်ပျက်မဲ့အရာတွေရဲ့ အရိပ်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ဆင်းကြွလာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ဒီအရာက ပြည့်စုံခဲ့ဲပါပြီ။ အခု ခရစ်တော်ရဲ့အရိပ် နောက်ကို မလိုက်ကြပဲနဲ့ ခရစ်တော်နောက်ကို လိုက်ကြပါ။
၁၈ တချို့လူတွေက ကောင်းကင်တမန်တွေကို တွေ့ခဲ့ကြတယ်လို့ အခိုင်အမာပြောပြီးတော့ ကောင်းကင်တမန်တွေကို ကိုးကွယ်ကြတယ်။ ဒီလူတွေက တခြားလူတွေဆီ သူတို့ရဲ့မမှန်ကန်တဲ့နှိမ့်ချမှုကို ပြကြတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ သူတို့ရဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့အတွေးတွေက ဒီလိုလူတွေကို မာနထောင်လွှားစေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို လိမ်ညာလှည့်ဖျားနေတဲ့ ဒီလူတွေကို မယုံကြည်ကြပါနဲ့။
၁၉ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလူမျိုးတွေက ဦးခေါင်းနဲ့ မပေါင်းစည်းကြဘူး။ ခရစ်တော်က ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမျိုးမျိုးနဲ့ အတူတကွ ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဘုရားရှင်က ခရစ်တော်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကို ကျွေးမွေးပြုစုလို့ အသင်းတော်ဟာ ကြီးထွားလာပါတယ်။
၂၀ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ဟာ ဒီလောကမှာ လူတွေဖန်တီးကြတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေဆီကနေ ခရစ်တော်နဲ့အတူ သေဆုံးခဲ့ပြီးကြပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီစည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာကြတာလဲ။ ခင်ဗျားတို့တွေက ဒီလောကသားတွေလို ပြုမူနေကြတယ်။
၂၁ လူတွေက “အဲ့ဒါကို မယူနဲ့။ အဲ့ဒါကို မစားနဲ့။ အဲ့ဒါကို မထိနဲ့။” လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။
၂၂ လူတွေက တစ်ချို့အရာတွေကို တားမြစ်ကြပြီးတော့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီသွန်သင်ချက်တွေက ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။
၂၃ ဒီလိုမျိုးသွန်သင်ချက်တွေက အမြော်အမြင်ရှိသယောင် ထင်ရတတ်ပါတယ်။ လူတွေက သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုကို ဖော်ပြပြီးတော့ မမှန်ကန်တဲ့ နှိမ့်ချမှုနဲ့ အသက်ရှင်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ မောပန်းနွမ်းလျတဲ့အထိ ဘာသာတရားတွေကို လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တားမြစ်ချက်တွေနဲ့ စည်းမျဉ်းတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ မကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒတွေကို မကျော်လွှားနိုင်ပါဘူး။ 1 I want you to know that I am going through big difficulties. But despite of this, I keep serving the Lord. I pray that my ministry would bringablessing to you and to those who live in Laodicea. Though some of you have never met me personally.
၁ ခင်ဗျားတို့ဟာ ခရစ်တော်နဲ့အတူ အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့ကြလို့ ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယာဘက် ဂုဏ်သရေရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်တဲ့ ခရစ်တော်ရှိတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံကို အာရုံစိုက်ကြပါ။
၂ လောကအရာတွေကို မစဉ်းစားဘဲ ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲ စဉ်းစားကြပါ။
၃ ခင်ဗျားတို့ဟာ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဘဝကနေ သေသွားကြပြီဖြစ်လို့ ဒီလိုဘဝမှာ ဆက်နေလို့ မရတော့ပါဘူး။ အခု ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်နဲ့အတူ ဘဝသစ်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောကကနေ လုံခြုံတဲ့အကွယ်အကာကို ဘုရားရှင်ဆီမှာ ခင်ဗျားတို့တွေ ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
၄ ခရစ်တော်နဲ့အတူ အသက်ရှင်ကြပါ။ ဒါဆိုရင် ခရစ်တော် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကြွလာတဲ့အခါ ခင်ဗျားတို့က သူ့ရဲ့ဘုန်းကျက်သရေကို မျှဝေခံစားရပြီးတော့ ခရစ်တော်နဲ့အတူ ပေါ်ထွက်ကြလိမ့်မယ်။
၅ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိကို သေစေကြပါ။ လိင်ကိစ္စအကျင့်ပျက်ယိုယွင်းမှုနဲ့ ဆိုးယုတ်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေ၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာစရာကောင်းတဲ့ ကိလေသာတပ်မက်မှုနဲ့ စွဲလမ်းမှုတွေကနေ သေဆုံးကြရမယ်။ လောဘကြီးခြင်းက လူတစ်ယောက်ကို အရာဝတ္ထုတွေအပေါ် ရုပ်ထုဆင်းထုလို ကိုးကွယ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လောဘကြီးခြင်းတွေကို အသေသတ်ကြပါ။
၆ လူတွေဟာ အပြစ်လုပ်ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ကို ရန်လိုလာကြတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်က သူတို့ကို အမျက်ဒေါသ ထွက်လာလိမ့်မယ်။
၇ ခင်ဗျားတို့လည်း တခြားသူတွေလိုပဲ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးကြပါတယ်။ လူတွေအားလုံး လုပ်ကြသလိုပဲ တူညီတဲ့အပြစ်တွေကို ခင်ဗျားတို့လည်း လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၈ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ လူဟောင်းဇာတိဟောင်း အသက်ရှင်ပုံရှင်နည်းတွေကို ခင်ဗျားတို့တွေ စွန့်လွှတ်ကြရမယ်။ စိတ်ဆိုးပြီးတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အမျက်ဒေါသ မထွက်ကြပါနဲ့။ ဆိုးယုတ်တဲ့အပြုအမူတွေမှာ မပါဝင်ကြပါနဲ့။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စော်ကားတာတွေနဲ့ ညစ်ညမ်းဆဲဆိုတဲ့စကားတွေ မပြောကြပါနဲ့။
၉ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မလိမ်ညာကြပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိဟောင်းကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အတွင်းလူဆီကနေ အဝတ်ဟောင်းချွတ်သလို ချွတ်ပစ်ပါ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူဆီကို ပြန်လှည့်မသွားကြပါနဲ့။
၁၀ ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောသဘာဝအသစ်ကို ယူတင်ဝတ်ဆင်ကြပါ။ ဘုရားသခင်က လူကို သူနဲ့တပုံစံတည်း ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ဒီထက်မက သိကျွမ်းပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူကို အသစ်ပြုပြင်ကြပါ။ ဒီလိုဆို ခင်ဗျားတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ တူလာကြလိမ့်မယ်။
၁၁ အခု ခင်ဗျားတို့က ယုဒလူမျိုးလား၊ လူမျိုးခြားလားဆိုတာတွေ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေဖျားလှီးတဲ့သူနဲ့ အရေဖျားမလှီးတဲ့သူကြားမှာလည်း ဘာခြားနားမှုမှ မရှိတော့ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့တွေ ဘယ်ဘာသာစကားကိုပြောတယ်၊ ဘာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တွေလား၊ လွတ်လပ်တဲ့သူလားဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ အခု ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို သူ့ဆီမှာ တလုံးတဝတည်း စုစည်းလိုက်ပါတယ်။
၁၂ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်တယ်။ သူက ခင်ဗျားတို့ကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ သန့်ရှင်းတဲ့သူ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အတွင်းလူကို ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောသဘာဝအသစ်နဲ့ ယူတင်ဝတ်ဆင်ပေးကြပါ။ တစ်ယောက်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေရင် စာနာရိုင်းပင်းမှုနဲ့ ကောင်းတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးကြပါ။ မာနထောင်လွှားခြင်းမရှိဘဲ၊ သနားကြင်နာခြင်းနဲ့ အထူးစိတ်ရှည်သည်းခံပြီးတော့ ပြုမူဆက်ဆံကြပါ။
၁၃ အားနည်းချက်တွေရှိရင်လည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်လက်ခံကြပါ။ အပြစ်တင်ညည်းညူစရာအကြောင်းကိစ္စတွေ ရှိလာရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ ခရစ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့သလိုပဲ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
၁၄ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ယူတင်ဝတ်ဆင်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက စည်းလုံးစေပြီးတော့ ပြီးပြည့်စုံမှုကိုယူလာပေးပါတယ်။
၁၅ ဘုရားသခင်ရဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းက ခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားကို အုပ်စိုးပါစေ။ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြပြီမို့လို့ ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ အသက်ရှင်ကြရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံကြပါ။
၁၆ ခရစ်တော် ပြောခဲ့တာတွေကို ဂရုတစိုက် သင်ယူလေ့လာကြပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ခရစ်တော် ပြောတဲ့စကားက ခင်ဗျားတို့ အထဲမှာ အသက်ရှင်ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ဉာဏ်ပညာရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ် ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ဆာလံကျမ်းထဲက ချီးမွမ်းသီချင်းတွေကို သင်ယူကြပါ။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ဓမ္မသီချင်းတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခွန်အားပေး တိုက်တွန်းကြပါ။ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကို ပေးတဲ့ သီချင်းသစ်တွေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လှုံ့ဆော်ကြပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်က ဘာလဲဆိုတာ သင်ယူဖို့အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပါ။
အဲ့ဒီအခါ ခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားက ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုလာလိမ့်မယ်။
၁၇ ခင်ဗျားတို့တွေက သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ စကားအပြောအဆိုတွေက ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလို ပြုမူကြရမယ်။ ခရစ်တော်ကတစ်ဆင့် အဖဘုရားသခင်ဆီကို လာပြီးတော့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါ။
၁၈ ဇနီးသည်တို့၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လင်ယောကျ်ားတွေကို နာခံကြပါ။ ဒါဟာ သခင်ယေရှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ ပြုမူသင့်တဲ့အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉ လင်ယောကျ်ားတို့၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဇနီးသည်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးကြပါ။ သူတို့ အပေါ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မပြုမူကြပါနဲ့။
၂၀ သားသမီးတို့၊ အရာရာမှာ မိဘစကားကို နားထောင်ကြပါ။ မိဘစကားကို နားထောင်ခြင်းက ဘုရားရှင်ကို ဝမ်းသာစေတယ်။
၂၁ ဖခင်တို့၊ ကိုယ်ကစပြီးတော့ ကိုယ့်သားသမီးတွေနဲ့ စကားမများကြပါနဲ့။ မဟုတ်ရင် သားသမီးတွေက ခင်ဗျားတို့နဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
၂၂ အစေခံကျွန်တို့၊ အရာရာမှာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လောကသခင်တွေကို နာခံကြပါ။ သူတို့တွေ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာပဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူတို့ နှစ်သက်အောင် အမြဲလုပ်ကြပါ။ ဘုရားသခင်င်ကို အထူးကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သခင်တွေကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ အစေခံကြပါ။
၂၃ ကိုယ်လုပ်တဲ့အရာကို ချစ်မြတ်နိုးကြပါ။ လူတွေအတွက် မဟုတ်ဘဲနဲ့ သခင်ယေရှုအတွက် လုပ်ဆောင်မဲ့အတိုင်း လုံ့လဝီရိယရှိရှိနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြပါ။
၂၄ ခင်ဗျားတို့က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သခင်ဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်ကို အစေခံနေကြတယ်ဆိုတာ သိထားကြရမယ်။ သခင်ခရစ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကို ဆုချမှာဖြစ်လို့ ခင်ဗျားတို့တွေဟာ အမွေဥစ္စာရကြလိမ့်မယ်။
၂၅ ဒါပေမဲ့ မကောင်းတာကို လုပ်ရင်တော့ အဲ့ဒီ မကောင်းမှုက ခင်ဗျားတို့ဆီကို ပြန်လာလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်က လူသားအားလုံးကို တရားမျှတစွာနဲ့ ဆက်ဆံပါတယ်။ 1 You are resurrected with Christ who sits in heavens at the right hand of God inaplace of honor. That is why you should pay attention to the reality of heaven.
15 May God's peace fill your hearts and help you make the right decisions. You became the members of one Body of Christ. That is why you should live in peace and be friendly with one another.
၁ သခင်တို့၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အစေခံကျွန်တွေအပေါ်မှာ တရားပြီးတော့ မျှမျှတတ ဆက်ဆံကြပါ။ ခင်ဗျားတို့ အထက်မှာလည်း ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့သခင်တစ်ပါး ရှိတယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။
၂ ဆုတောင်းဖို့အတွက် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အချိန်ကို ပုံမှန်ဆက်ကပ်ကြပါ။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ ဆုတောင်းကြပါ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ အာရုံမလွင့်စေပါနဲ့။
၃ ကျွန်တော်တို့ အတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးကြပါ။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့စကားကို လူတွေဆီ ဟောပြောရတဲ့အခွင့်အရေးတွေ ကျွန်တော်တို့ကို ပေးဖို့ တောင်းလျှောက်ကြပါ။ ဒါမှ ကျွန်တော် ချုပ်နှောင်ခံရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာအကြောင်းကို တခြားသူတွေဆီ ကျွန်တော်တို့တွေ ပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
၄ ခရစ်တော်ရဲ့လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို လူတွေ နားလည်နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ရှင်းပြရမှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်အတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါ။
၅ ယေရှုကို မယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့ ပညာသတိရှိရှိ ပြုမူကြပါ။ သူတို့တွေနဲ့ အတူရှိတဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုကြပါ။
၆ မယုံကြည်သူက ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်က ဘာလဲဆိုတာ နားလည်လာတဲ့အခါမှာ သူသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေတွေကို ရလာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မယုံကြည်သူနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ သူ့ကို ခရစ်တော်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်အကြောင်းကို ပြောပြကြပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အစားအစာထဲကို အရသာရှိအောင် ဆားထည့်သလို နားဝင်ချိုအောင် ပြောပြကြပါ။
၇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်ညီလေး တုခိတ်ဟာ သခင်ယေရှုကို သစ္စာရှိရှိ အစေခံပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သူက ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော့်အကြောင်းတွေအားလုံး ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
၈ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ဆီ တုခိတ်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို သူ့ဆီ ပြောပြကြပါ။ သူက ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကို ငြိမ်သက်စေမှာပါ။
၉ တုခိတ်က ခင်ဗျားတို့လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ညီလေး သြနေသိမ်နဲ့ အတူလာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ရတဲ့ညီလေး သြနေသိမ်ဟာ သခင်ယေရှုကို သစ္စာရှိရှိ အစေခံနေပါတယ်။ တုခိတ်နဲ့ သြနေသိမ်က ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ဆီ အကုန်ပြောပြကြလိမ့်မယ်။
၁၀ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ထောင်သားဖြစ်နေတဲ့ အာရိတ္တာခုက ခင်ဗျားတို့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဗာနဗရဲ့တူ မာကုကလည်း ခင်ဗျားတို့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ မာကုက ခင်ဗျားတို့ဆီကို လာခဲ့ရင် ခင်ဗျားတို့တွေ သူ့ကို လက်ခံကြရမယ်။
၁၁ အားလုံးက ယုတ္တု လို့ခေါ်ကြတဲ့ ညီလေး ယေရှုက ခင်ဗျားတို့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ယုဒလူမျိုးထဲမှာ သူတို့တွေပဲ ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက် ကျွန်တော်နဲ့အတူ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို တကယ်ဝမ်းသာစေပါတယ်။
၁၂ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ အစေခံဖြစ်တဲ့ ဧပဖြဟာ ခင်ဗျားတို့ လူမျိုးထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီးတော့ သူကလည်း ခင်ဗျားတို့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူက ခင်ဗျားတို့အတွက် ဇွဲရှိရှိနဲ့ အမြဲတမ်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဘုရားရှင်က ခင်ဗျားတို့ကို ရင့်ကျက်စေဖို့ တောင်းလျှောက်ပေးနေပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ဘာလုပ်ချင်သလဲဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့တွေ အပြည့်အဝ နားလည်ကြဖို့အတွက် သူက ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
၁၃ ဧပဖြဟာ ဇွဲလုံလကြီးမားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အခိုင်အမာပြောရဲပါတယ်။ သူက ခင်ဗျားတို့ အပါအဝင် လောဒိကိနဲ့ ဟေရပေါလိ မှာ နေတဲ့သူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
၁၄ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ရတဲ့ ဆရာဝန် လုကာ နဲ့ ဒိမာ က ခင်ဗျားတို့ကို နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။
၁၅ လောဒိကိမှာ ရှိကြတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေဆီ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပို့ပေးကြပါ။ ညီမ နံဖ နဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်မှာစုဝေးကြတဲ့ ယုံကြည်သူေတွေကိုလည်း နှုတ်ဆက်ပေးပါ။
၁၆ ဒီစာကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာ ဖတ်ပြပြီးရင်တော့ လောဒိကိ မှာရှိတဲ့ ယုံကြည်သူတွေဆီကို ပို့ကြရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ အသင်းတော်မှာ ဖတ်ရမဲ့ စာတစ်စောင်ကိုလည်း လောဒိကိ မှာရှိတဲ့ ယုံကြည်သူတွေဆီကို ကျွန်တော် ရေးခဲ့ပါတယ်။
၁၇ အာခိပ္ပု ကို “သခင်ယေရှုဆီက ခင်ဗျား လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ဘုရားအစေခံခြင်းအလုပ်ကို တာဝန်ကျေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။” လို့ ပြောပေးကြပါ။
၁၈ ကျွန်တော် ပေါလုက ဒီစာကို ကိုယ့်လက်နဲ့ရေးပြီး ခင်ဗျားတို့ကို နှုတ်ခွန်းဆက် လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ထောင်ထဲမှာ သံကြိုးတွေနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာ အသက်ရှင်ကြပါ။ အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 Masters, be fair and just to your slaves. Remember that there is the Lord above you who can see all of us from heaven.